Dina mamaritra ireo fomba mendrika - Madagascar Informations
Environnement Publications des membres
Dina mamaritra ireo fomba mendrika
21 septembre 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
DINA MAMARITRA IREO FOMBA MENDRIKA SY MAHITSY, IFAMPIFEHEZAN’IREO KANDIDA AMIN’NY FIFIDIANANA FILOHAMPIRENENA MBA HISIAN’NY FITONIANA
Izahay kandida amin’ny fifidianana Filoham-pirenena 2018 eto Madagasikara :
• Manaraka ny Didy aman-dalàna manan-kery, ireo Fifanarahana sy Fomba fanao iraisampirenena momba ny fifidianana ;
• Mandray am-po ny fanajana ny Zo maha-olona voafaritry ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon’olombelona, ny Sata Afrikana momba ny Zon’olombelona sy ny vahoaka ary ny Lalàmpanorenana lany tamin’ny taona 2010, ary koa ny Sata Afrikana mifehy ny Demokrasia, ny Fifidianana sy ny Fitantanana ;
• Mandray am-po ny hasin’ny Soatoavina malagasy (Aina, Fanahy, Fihavanana);
• Resy lahatra ny amin’ny tsy maintsy hananana fifidianana demokratika sy milamina, hiantohana ny fampiharana ny fitondrana tsara tantana, hanamafisana ny hetsika hiadiana amin’ny kolikoly, sy ny famotsiam-bola ary ny famatsiana ara-bola ny asa fampihorohoroana.
• Mahatsapa ny andraikitra tokony ho raisina mba hitandroana sy hanamafisana ny firaisankinam-pirenena sy ny filaminana ara-tsosialy;
• Mahatsapa fa fanetribe ho an’ireo rafi-panjakana demokratika, ny toe-karen’ny Firenena sy ny fanjakana tan-dalàna ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna;
• Sahiran-tsaina ny amin’ny fomba hialàna amin’ny fiverimberenan’ny krizy nateraky ny fifidianana nanomboka tamin’ny fahazoana ny fahaleovantena, ka nitarika ny fahaverezan’ny Soatoavina, ny Etika sy ny ara-moraly;
• Resy lahatra fa ny fifampiresahana amin’ny samy Malagasy dia dingana hizorana ho amin’ny fiverenan’ny Fihavanana;
• Manaiky fa ny iraka omen’ny mpifidy dia tokony hiompana amin’ny fikatsahana ny soa iombonana mba ho tombotsoan’ny daholobe ;
• Mahatsapa fa marefo ny demokrasia, ny maha-tany tan-dalàna ary ny andraikitra raisina mba hiantohana an’izany ;
• Mahatsapa fa mitondra fitoniana ara-politika sy filaminana maharitra, antoka hisian’ny fandrosoana ara-toe-karena sy ara- sosialy ho an’ny taranaka mifandimby, ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny fomba demokratika ;
• Fatra-panaja ny foto-kevitra mampitovy lenta ireo kandida, mametraka amin’ny toerana faratampony ny Zo sy ny Fahalalahana ;
• Mahatsapa fa ilaina ny fiarovana ny fananam-bahoaka sy ireo loharanon-karena voajanahary, mialoha, mandritra ary aorian’ny vanim-potoanan’ny fifidianana ; Resy lahatra tanteraka amin’ireo voalaza ireo,
2 KOA MANAPA-KEVITRA, an-kitsipo sy araka ny feon’ny fireritreretanay, fa :
(i) Mandray sy manaiky ity Dina ity ho mpandrindra ny fifandraisana sy ny fitondrantenanay, mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana ;
(ii) Hanaparitaka sy hampanaja ireo didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana sy ity Dina ity amin’ireo mpiray tanindrazana aminay.
MIARA-MANAIKY IZAHAY, NOHO IZANY FA:
Mialohan’ny andro fandatsaham-bato :
1. Hanome vahana ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy, ny tanora sy ireo vondron’olona marefo, ka
izany dia amin’ny zotram-pifidianana manontolo ;
2. Tsy hanodinkodina ny lisi-pifidianana, na amin’ny fomba inona na inona ;
3. Hanentana an’ireo mpanohana sy ireo mpikatroka rehetra mba hanaramaso ny lisi-pifidianana ;
4. Hanao an-tsitrapo ny fanambaram-pananana, sy izay mety ho tombontsoa ara-toe-karena, eo anivon’ny BIANCO na dia ireo izay tsy teren’ny lalàna hanao izany aza ;
5. Hampahafantatra ny sarababem-bahoaka ny tetibola, ireo karazany sy ny loharanom-bola hampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra;
6. Handà izay mety ho endrika famatsiam-bola mila tambiny ka mety hanimba ny tombontsoampirenena;
7. Hanome vahana kokoa ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana, fa tsy ny fialam-boly;
8. Tsy hanao fandaniam-bola mihoa-papana sy tsy am-piheverana manoloana ny fahantrana efa
9. Hanilika izay mety ho endrika kolikoly rehetra, indrindra fa ny fividianana safidy sy ny feon’ny
fireritreretana amin’ny alalan’ny fizarana entana na vola ;
10. Tsy hampiasa mivantana na ankolaka izay mety ho tombontsoa, enti-manana sy fahefana azo
amin’ny Fanjakana sy ireo rantsamangaikany na izay rafi-panjakana sy rafitra miankina amin’ny
11. Tsy hampiditra, tsy hampiofana, tsy hamatsy vola, tsy hamatsy fitaovam-piadiana na hampiasa
« Be sandry » sy milisy mba hambolena korontana ;
12. Hampiasa fomba fiteny voalanjalanja, tsy mitratrevatreva ary haneho fihetsika aman-toetra
mifanaraka amin’ny kolontsaina Malagasy;
13. Hanalavitra ireo resaka rehetra miendrika fanavakavahana, na ara-piaviana, na ara-poko, na
amin’ny maha lahy na maha vavy, na koa ara-pinoana;
14. Hanentana ny mponina ny amin’ny tokony iarovany ny fananam-bahoaka sy ireo loharanonkarena
15. Hampihatra mivantana amin’ny maha tompon’andraikitra, ireo fahefana voatondro ao amin’ny lalam-pifidianana mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana Mandritra ny andron’ny latsabato
16. Na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana, dia tsy hanodikodina, na handrahona , na koa hanao kolikoly amin’ireo mpiasa miandraikitra ny raharaham-pifidianana, amin’ireo delegen’nympilatsaka hofidiana na ny delegen’ireo kandidà mpifaninana, ary koa amin’ireo mpifidy ;
17. Tsy hanakorontana ny fizotran’ ny latsabato ;
18. Tsy hampiasa, na mivantana, na an-kolaka, an’ireo tombontsoa, sy ireo enti-manana ary ny fahefana avy amin’ny fanjakana, sy ny ratsamangaikany na koa ireo rafitra miankina na tsy miankina
amin’ny fanjakana ;
19. Hampandray andraikitra an’ireo delege sy solontena, sy mpanohana, mba hahatonga azy ireo hanao fihetsika manaja sy lavitry ny herisetra ;
20. Hampahafantatra, aorian’ny fanamarinana sy fitondrana porofo mazava, ireo fihoaram-pefy, hosoka ary tsy fanarahan-dalàna na fandikan-dalàna, ka izany dia ao anatin’ny fanajana tanteraka an’
ireo fepetra sy fitsipika voalazan’ny Lalàna.
Aorian’ny vaninandro fandatsaham-bato
21. Tsy hamoaka, na hanambara voka-pifidianana tsy mbola ofisialy, mba hitandroana ny fitoniana ;
22. Hanaja ny voka-pifidianana ;
23. Hifampiarahaba amim-pahamendrehana araka ilay fomba fiteny manao hoe : « Adin’ombalahin’ny
mpianakavy : izay mandresy tsy hobiana, izay resy tsy akoraina » ;
24. Tsy hanao fitenenana mety hanafintohina, miaro fankahalana, miendrika fanompana ny hafa, na mety hiteraka hatezerana, ka hitarika fifandonana ;
25. Hivoy ny kolontsain’ny fifampiresahana sy fanelanelanana ;
26. Hitondra eo anatrehan’ny fitsarana mahefa izay rehetra mety ho fifanolanana na koa
Ho an’ny kandidà voafidy,
27. Hamoaka ny fanambaram-pananana amin’ny fanombohana sy amin’ny fiafaran’ny fe-potoana hiasana ;
28. Hanatanteraka antsakany sy andavany an’ireo fanekena sy fampanantenana natao nandritra ny fampielezan-kevitra ;
29. Hanokana teti-bola manokana, ary miandalana, ho an’ireo Rafitra miady amin’ny kolikoly araka y “Paikady nasionaly amin’ny ady amin’ny kolikoly” (2015-2025);
30. Manome toky fa hanatanteraka, ao anatin’ny fotoana maha mety azy, ny Dinika ho fanatanterahana ny Fanorenana Ifotony ny Firenena sy ny Repoblika, antoky ny fitonian’ny fiainampiaraha-monina. Fanaraha-maso amin’ny fampiharana ny Dina
Mba ho fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny fanajana ity DINA ity, Izaho izay manao sonia etsy ambany, dia manome fahefana :
Andaniny, ireo Vaomiera ahitana an’ ireo andry sy rafi-panjakana : Ny » Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM), ny « Vaomiera Mahaleotena momban’ ny Fifidianana » (CENI), ny « Vaomiera Miaro ny Fahamarinana » (CSI), ny « Birao Mahaleotena Iadiana amin’ny Kolikoly » (BIANCO), ny « Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola » (SAMIFIN), ny « Vaomiera Mahaleotena miaro ny Zon’olombelona(CINDH), ny « Filankevitra Ambony ho Fiarovana ny Demokrasia sy ny Fanjakana Tan-dalàna » (HCDDED),
Ankilany ireo mpisehatra eo anivon’ny Fiarahamonim-pirenena : ny « Tetikasa FANDIO » (Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe Ifantenana Olombanona), ny fikambanana « Tolotsoa », ny « Transparency International Initiative Madagascar », ny « ROHY »(Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iarahamanana), ny fikambanana « Justice et Paix », najoro mba ho fampandehanana sy fanajana ity Dina ity.
MANAMBARA AHO FA NY FIHETSIKA REHETRA MIFANOHITRA NA MANDIKA IREO FOTO-KEVITRA IREO DIA HANITSAKITSAKA NY FAHAMENDREHAKO.
← Charte de bonne conduite
Ambassadeur de l’Union Européenne →
Fin de formation des Chefs ZAP
3 avril 2018 Madagascar Informations 0
21 août 2018 Madagascar Informations 0
Le Président Rajaonarimampianina à Nosy Be
23 juillet 2018 Madagascar Informations 0